Ukuhlaziywa kwe-2016 Ducati 959 ePanigale
Intshayelelo: Yintoni Entsha Ngo-2016 Ducati 959 Panigale?
I-2016 i-Ducati 959 iPanigale iquka impumlo ebanzi, i-intake ebanzi, i-fairings entsha kunye ne-windscreen ende. Milagro
Unani okwaneleyo? Xa kuziwa ekuthiwa yi-middleweight motorcycles, i-Ducati Panigale 899 ithathe iibhokisi ezininzi zabaphathi abalambileyo abanamandla abafuna ukuphuma kwi-full-bore 1199 okanye ngo-1299. Ngama-twin-898cc ye-twin enkulu, i-899 iphoswe kakhulu amandla kunokuba ubukhulu bobukhulu bobukhulu obufana ne-600cc okanye i-750cc ibhayisikili, kodwa kwakungekho ukwesabisa njengenja ephezulu ephihliweyo.
Ngokutshintshwa kwenkqubela kwintsapho ye-Ducati superbike, i-899 ithathelwa indawo yi-2016 i-Ducati Panigale 959 (kunye nexabiso eliqala lokuqala: $ 14,995 ngepeyinti ebomvu). Yintoni entsha kunye nale (nangaphezulu) ebizwa ngokuba yi-Super Mid? Ukuqala, injini igcina i-bore efana kodwa ikhulisa uhlangothi lwayo ukuvelisa ukufuduka kwama-955cc. Ukukhuphuka kwenyuka ukusuka kwi-148 ukuya kumahhashi ukuya kwi-157 yamandla ehashe (i-2 pesenti izuze), kunye ne-torque inyuke ukusuka kwi-99 Nm ukuya kwi-107.4 Nm (i-4%). Amandla okulwa ngamahhashi ngoku aphakama kwi-10,500 rpm, i-drop rpm ye-250 ukusuka kwiphondo layo langaphambili.
I-959 ibuye izuze i-shedheadhead injectors eyongezelelweyo ukusuka kwihlabathi lokugijima, kunye nombhobho wokukhupha ophezulu, ongama-1299 wokutshitshisa ukushisa ngokugqithiseleyo kunamapayipi amandulo, amancinci. Ukuboleka kwi-As, ngaphambili iPangale 959 i-Big Piston ifom ephezulu phambi kwayo kunye ne-steamper, i-ABS, ulawulo lwe-traction kunye ne-injini ye-braking. Ngeli xesha, i-959 iphakamisa i-wheelbase ukusuka kwi-1,426mm ukuya kwi-1,431mm, kunye ne-swingarm engezantsi ye-swingarm pivot yokongeza isantya esiphezulu. I-Cosmetically, entsha iPanigale 895 izuza i-width, i-1299-njengempumlo kunye ne-intake enkulu, ngelixa i-fairings ne-windscreen ephakamileyo ijikeleza umboniso.
Ezi zinguqu zivakalelwa njani kumzila? Chofoza 'Okulandelayo' ukuze ubone ukukhwela kwendlela yokukhwela.
Kwimizila: Ukucoca kunye neDicing Valencia ngeNew 959 ePanigale
Ukujongana nekona kwiSekethe uRicardo Tormo eValencia, eSpain ukuya kwiDucati 959 ePanigale. Milagro
Isethulo sokusasazela i-Ducati 959 uPanigale esitsha sasiqhutyelwa kwiSekethe uRicardo Tormo eValencia, eSpain, isiphaluka esinomlinganiselo oqhelekileyo wama-2.5-mile ejikelezayo, ejikeleze kakuhle kunye ne-14 efanelekileyo. Umlilo uphawule i-injini engama-959, kwaye i-Ducati chug-a-lug bark eyaziwayo ivela kwi-underslung exhaust, impatient, i-bass-heavy thump enenjongo eyona nto kubonakala kukukhumbuza ukuba awukhwele i-run-of -mill-line-ezine-cylinder.
Phuma emigodini, kwaye i-Panigale ikhawuleza ngokukhawuleza ize iqoke umgama wayo malunga ne-6,000 rpm, apho i-LCD tachometer yayo iqhubela phambili ize ihlasele i-limit lim reviter kwi-11,500 rpm. Ukuba ulinda ukubona ibomvu ibomvu ejikeleze ipaneli yecandelo le-LCD olilinde ixesha elide; I-torque yenani iyenzeka kwi-9,000 rpm, kwaye ukutshintsha kufuphi nelo nqanaba kukuhlahlela kwiqhekeza enamandla yebhodi yamandla eqhubela ibhayisikili phambili nangakumbi.
Isixhobo sokuqala sokushiya eValencia yikona elikhawulezayo elibonisa ukuba ukungafihli kwe-959; ayithathi yonke imizamo yokufumana ibhayisikili engama-429. Emva kokuxhomekeka, iPanigale ihlala ngokuzinzile, idla ikhoneni ngokulula. Ukukhahla nge-sticky sticker sticker SC2, i-959 iPanigale yaziva ikhuselekile kwaye iqinisekile, ivelise ngokwaneleyo ukukhawuleza ukwenzela ukukhuthaza ukwanda kwekhonkco - ngokuqinisekileyo ayilimazi ukuba isakhelo se-959 sifana ne-1299's, kwaye sinokwabelana inxalenye efanayo nenombolo. Ukugqithisa umphunga kwimiphumo kubonisa ukugqithiswa kwamandla okutshatyalaliswa kwesondo; ukuba umlenze uyasetyenziswa ngokukhawuleza, ukulawula ukulandelwa kwebala, ukuxhomekeka kwimeko yayo (ukususela ku-1 ukuya ku-8), ithayi iyakunqanda ngokukhawuleza ukukubonisa ukuba i-bike ayibambeli, kodwa akuninzi ukuba ungazizithembi i-throttle kwikona elandelayo.
Kwi-setting yayo ye-ABS egciniweyo, inkqubo ye-anti-lock ye-959 ikhaba ngokukhawuleza kwindlela; Ukukhulula ubukumkani kuvelisa izitye ezinamandla ngokwaneleyo ukuphakamisa isondo elingaphandle (kwaye ufumane isandla sakho sinobuhlungu kwaye uyabeka ukuba ubeka kuyo). Kodwa njengoko ukhetha ukukhawuleza kwinqanaba, ukuhanjiswa okugqithisileyo kuka-959 kunye ne-tapered amandla akukubeka ekuqapheleni ngokukhawuleza njengoko kuthiwa, ukufuduka okukhulu, ibhayisikili elinamandla. I-clutch entsha ye-slipp iphinde ikhuthaze i-downshifts enobudlova ngaphandle kokuphazamisa i-chassis (kwaye malunga nexesha eli bhasikidi lifumana i-slipping stick), ngelixa isici sitholakala kwiibhayisikili zokuqala ), ngelixa i-Ducati Quick Shift isebenzise i-clutch-free-upshifts kunye ne-cog swaps . Nangona ibhayisikili yayenziwe ngokuvisisana kwiValencia, injini yayibonakala ihamba ngokukhawuleza iphuma emacaleni amabini. Andikwazi ukufumana ingcaciso engqiqweni ngaphandle kokuba kungenzeka ukuba iinguqulelo zezo ngqungquthela zisebenza kunye nokulawula ukulandelela ukudala ukuguqulwa kwamandla okuhanjiswa.
Ukukhawuleza, okuchanileyo, kunye namandla anele ukubetha inqabileyo ibonise isivinini se-160 mph kwinqanaba laseburhulumenteni, u-2016 uDucati 959 uPanigale wayelungele isithuthuthu eseleyo kwesekethe, kwaye mhlawumbi isithuthuthu esaneleyo kwiimfuno zakho.
2016 Ducati 959 Panigale: Ngezantsi, Iinkcukacha
I-959 eValencia. Milagro
I-2016 i-Ducati 959 iPanigale ithatha isinyathelo esiphakamileyo ukususela kwi-899 ngamandla angakumbi, ukudibanisa i-clutch encane efunekayo, kunye nemisebenzi yomzimba. Nangona iyancipha ngaphezu kwayo eyayihamba phambili (inokuthi ikhuphe ezinye i-purist), i-959 yokwandisa amandla-isisindo isisindo sinokukwazi ukuvakalelwa ngokukhawuleza kunokugqithisa okuqhelekileyo (ngaphandle kokugxininisa kakhulu kwizithende zamathambo amakhulu 1299.) Unani elaneleyo? Kwimeko ye-959, le-157 ye-horsepower superbike ivakalelwa kakuhle.
Injini : i-955cc ii-twini
Isiphumo : 157 i-horsepower @ 10,500 rpm, 79 lb-ft torque @ 9,000 rpm
Ukuthunyelwa : Incwadana ye-6-speed manual, kunye neDucati Quick Shift (ukukhupha kuphela)
Ukuphakama kwesihlalo : 32.6 intshi
Ukumiswa : Ukulungelelaniswa ngokupheleleyo ngeeFiksi ezinkulu zePiston, i-damper yokuhamba
I-elektroniki : Iimodeli zokuhamba ezilungisiweyo (ngexesha elimiselweyo), ulawulo lwe-traction, ABS, injini ye-injini ye-braking, i-DDA telemetry ilungile
Isalathisi Isisindo : 429 lbs
Ixabiso : $ 14,995 (obomvu)
2014 Ukuhlaziywa kweDucati Monster 1200S
2012 Ducati 848 Streetfighter Ukuhlaziywa
Ukuhlaziywa kweDucati Diavel Tech
2015 Inkwenkwezi zeVolt C-Spec Review
Ziziphi Iinqununu Ziya Ebudeni?
USvetlana Shkolina: Ukuzalisekisa i-Potential High Potential
5 Iimveli zemihla ngemihla Wonke umntu kufuneka afunde
Ukukhulisa i-Crystal Yakho Imbewu: Izikhokelo